Warbixin: Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo la shaaciyay isku aadka wareega sadexaad – Radio Daljir
Warbixin: Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo la shaaciyay isku aadka wareega sadexaad
Luulyo 29, 2013 1:57 g 0
Bosaaso, July 29 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ay ku tartamayeen 24- dusgi oo ka dhisan deegaanada Puntland ayaa xalay lasoo gabagabeeyey wareegii labaad , waxaana caawa la shaaciyay sideeda dugsi ee usoo gudbay wareega sadexaad ee barnaamijka.
Gudiga barnaamijka Tartan iyo Tacliin ayaa sidoo kale sheegay habeebanada ka harsan barnaamijka in la qaban doono hal tartan ama ay ku tartamayaan laba dugsi , halkii wareegyadii koowaad iyo labaad ay tartami jireen afar dugsi oo la qaban jiray laba qayb oo tartan ah.
Waxaa sidoo kale gudiga sheegay wareega sadexaad dugsiyada hadii bareejo galaan in lagu dari doono su’ aalo dheeraad ah si loo kala reebo oo habeenkii usoo baxo hal dugsi.
Gudiga ayaa sidaan shaxda hoose ah isugu aadiyay dugsiyada sideeda ee kasoo gudbay wareegii koowaad iyo labaad ee usoo baxay wareega sadexaad.
Isku aadka koowaad ee Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Dugsiyada sare ee Puntland
Dugsiga 1aad Dugsiga 2aad Taariikh Dhibcaha
1 Nugaal Secondary VS Shaafici Boosaaso Talaado 21 Ram 31-Jul
2 Al-Nuur Baran Al-Azhar Qardho Arbaco 22 Ram 1-Aug
3 Dangoray Secondary VS Dhahar Secondary Khamiis 23 Ram 2-Aug
4 Cumar Samatar GLKY VS Xamdaan Boosaaso Jimco 24 Ram 3-Aug
Gudoomiyaha Tartan Iyo Tacliin
Yuusuf Suudi Cabdi
Barnaamijkaan ayaa waxaa maalgalinaya wasaaradda waxbarshada Puntland, Golis Telcom, Salaam Bank iyo daladda waxbarshada PEN oo soo diyaarisa su’ aalaha tartanka , waxaana baahiya Radio Daljir xarumihiisa Soomaaliya.
Ciidamo Ethiopian ah oo gaadhey degmada Qansax dheere ee gobolka Baay